10 သင်ကသွားရောက်ရမည်အီတလီနိုင်ငံခုနှစ်တွင်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Castle | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 သင်ကသွားရောက်ရမည်အီတလီနိုင်ငံခုနှစ်တွင်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Castle
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်အီတလီမှာရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်အများအပြားရှိပါသည်! ထိုကဲ့သို့သောရှည်နှင့်အတူ, ကြွယ်ဝသောသမိုင်း နှင့်ယဉ်ကျေးမှု, ဒီတိုင်းပြည်ရဲတိုက်ရှာဖွေစူးစမ်းဘို့သွားကြဖို့ရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ကိုကူညီရန် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်, ဒီမှာပါ 10 သငျသညျဆက်ဆက်ပျော်မွေ့သွားကြသည်အီတလီမှာရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်:
သင်အကြောင်းကိုစပ်စုရောက်နေတယ်ဆိုရင် အဆိုပါ Chianti ၏မွေးရပ်မြေ ဝိုင်, သငျသညျကိုသှားသငျ့ပါရှိရာဤ. ဒါကရဲတိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုကျော် sprawls 3,000 ဧက, စပျစ်ဥယျာဉ်နှင့်သံလွင်အာရှရပင်တွေနဲ့ပြည့်စုံ. ထို့အပွငျ, ဒါဟာလုံးဝအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်ပါသည် တစ်နေဝင်စဉ်အတွင်းကြည့်ဖို့ ခရီးစဉ်.
များ၏လှပသောတောင်ကုန်း Tuscany ဒီမျက်စိ-ဖမ်းဖုံးကွယ် ရဲတိုက် ထူးခြားတဲ့ဗိသုကာလက်ရာနှင့်အတူ. ၎င်း၏ 19 ရာစုပိုင်ရှင်အရှေ့တိုင်းလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူကပြန်ဆန်းသစ်ချင်ခဲ့တယ်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သူမနဲ့အခြားအီတလီရဲတိုက်ကိုက်ညီနိုင်မယ့်အသွင်ကိုပေး၏.
နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေ? ဒီရဲတိုက်မှာ, သငျသညျအပန်းဖြေထွက်ပြေးဖို့နှင့်မယ့်အဗိသုကာ၏အလှအပနှင့်၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ခံစားနိုငျ. အဆိုပါ 1700 ခုနှစ်မှစ., ဒီရဲတိုက်ဧရိယာ၏ကိုလှိမ့တောင်ကုန်းကိုကျော်လက်ပတ်နာရီရပ်ယခုအခါဖြစ်ပါတယ် အများအပြားသာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူဟိုတယ်.
built-in 10 ရာစု, Valenzano ရဲတိုက် အသက်အကြီးဆုံးရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်၏တဦးတည်းနေဆဲအီတလီမှာရပ်. ဒီနေ့နေဆဲကြောင့်ထို့နောက်ဖြစ်သကဲ့သို့နည်းတူခံ့ညားခြင်းနှင့်ညားဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, အစားတစ်ဦးတပ်စခန်းအဖြစ်အမှုဆောင်များ, ဒီရဲတိုက်သည်ယခုအခါဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်, တင်းနစ်တရားရုံးများနှင့်ဂေါက်ကွင်းနှင့်အတူပြည့်စုံ.
ဒါကရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်ဇာတ်လမ်းအနှစ်တထောင်လွန်ခဲ့တဲ့ကျော်စတင်ခဲ့သည်, နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကတည်းကအောင်နိုင်တို့တွင်အအကြိမ်ပေါင်းများစွာလက်အားလဲလှယ်လိုက်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေတ်ငြိမ်းချမ်းစွာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အများအပြားလယ်ယာစိုက်ပျိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်နှင့်အတူ. ဧည့်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်းကချစ်ပြီး အံ့သြဖွယ်ဗိသုကာ.
6. ဘိန်း Castle
ယင်း၏တာဝါတိုင်များ၏တဦးတည်းအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဒဏ္ဍာရီရှိပါသည်. ဒေသခံတွေဆိုသည့်အတိုင်း, ၎င်း၏ဟောင်းတဦးပိုင်ရှင်များ၏တဦးတည်း၏အငြိမ်ဝပ်ရာအရပ်ကိုဖြစ်ပါသည်. သတင်းများအရ, သူမကထိုမျှော်စင်များတွင်ယောက်ျားသွားရောက်လည်ပတ်တက်သော့ခတ်ဖို့အသုံးပြု, လူအမျက်ထွက်တော်မူသော. သို့သျောလညျး, ဒဏ္ဍာရီဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါဘူး. အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ချင်း ရဲတိုက်ပတျဝနျးကငျြချိုင့်သားကခရီးစဉ်ကိုတန်ဖိုးရှိအောင်.
ဤသည်ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ရှာဖွေနေရဲတိုက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များနှင့်များ၏ဗိသုကာလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း Renaissance ကာလ. ထို့အပွငျ, ကအီတလီရဲတိုက်တို့တွင်တထောင်တစ်နှစ်ကြားရှိနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဒါကရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်ကို Florence နီးစပ်သူဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့ဖြစ်ပါသည် တစ်ရက်ခရီးစဉ်အဘို့ကြီးသော ထိုအရပ်မှ.
Cabbiavoli Castle တစ် Tuscan ရဲတိုက်၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ယင်း၏လှပသောရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်အတူ, လယ်ကွင်း, စပျစ်ဥယျာဉ်, နှင့်သံလွင်အာရှရပင်, ဒီရဲတိုက်ရိုးရှင်းစွာကအားလုံးကိုရှိပါတယ်. သငျသညျအဲဒီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါအသင်ပင်မြင်းစီးခြင်းသွားနိုင်ပါတယ်!
အီတလီနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့အတွက်အများဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရဲတိုက်တစ်ခုမှာတစ်ဦး cliffside အပေါ်မသေချာလှဆောက်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်. ကျောက်ပေါ်မှာမြေထဲပင်လယ်ချိုး၏လှိုင်းတံပိုးကို, နှင့်ဤရဲတိုက်ကသူတို့ကိုအထက်နေရာယူထား. သင့်အနေဖြင့်အတွင်းပိုင်းသွားရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ရဲတိုက်နေတုန်းပဲဓါတ်ပုံတွေများအတွက်စံပြဖြစ်.
ခရီးသွားများအတွက်အကြားအားလုံးအနုပညာချစ်သူများအဘို့, Montegufoni တစ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဦးတည်ရာဖြစ်လိမ့်မည်. ဒါဟာမျက်နှာဖုံး၏ကျော်ကြားအခန်း၏မူလနေရာဖြစ်သည်, င် Gino Severini ကြက်သရေနံရံဆေးရေးပန်းချီကားများ. ထို့အပွငျ, ဒါဟာလုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှု, ထိုသို့လူတိုင်းကိုခံစားနိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အီတလီနိုင်ငံအတွက်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရဲတိုက်ကြည့်ဖို့အဆင်သင့်? သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်စီစဉ်ဖို့သေချာပါစေနှင့် စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား အချိန်မှန်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 သင်ကသွားရောက်ရမည်အီတလီနိုင်ငံခုနှစ်တွင်ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင် Castle” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူဒါပေမယ့်ကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ, ဒီ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-castles-italy%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#နတ်သမီးပုံပြင် #traveleurope ရဲတိုက် europetravel italyvacation မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelitaly